State Counsellor receives Chairperson and members of the Independent Commission of Enquiry – Ministry of Foreign Affairs
Also present at the meeting were Union Minister for the Office of the State Counsellor, U Kyaw Tint Swe, Union Minister for the Ministry of the Office of the Union Government U Thaung Tun, Union Minister for the Ministry of International Cooperation, U Kyaw Tin and officials from the Ministry of Foreign Affairs.
The Government of Myanmar had announced the establishment of the Independent Commission of Enquiry on 30 July 2018 as part of the Government’s initiative to address reconciliation, peace, stability and development in Rakhine. The Commission composed of four members: two international and two national members.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သံအမတ်ကြီး ရိုဆာရီယို မယ်နာလိုနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးမြသိန်း၊ သံအမတ်ကြီး ကင်ဇို အိုရှီးမား၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် တို့အား ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ (၁၄၀၀)နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မှတ်ချက် အတည်ပြုရေးကိစ္စ၊ ကော်မရှင်အား အထောက်အကူပြုမည့် အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံရာသို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။